ညဘက်မှာ အချဉ်စားလို့ရလား - Hello Sayarwon
Ye Zon Aung မှ ရေးသားသည်။ 08/09/2020 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
အိပ်ရာဝင်ခါနီး အချဉ်တွေမစားနဲ့လို့ ငယ်ငယ်တုန်းက လူကြီးတွေ ပြောတာ ခံရဖူးကြတဲ့လူတွေ ရှိကြမယ်ထင်တယ်။ အိပ်ခါနီး အချဉ်တွေစားရင် အစာအိမ်ထိခိုက်တတ်တယ်လို့ ဆိုတတ်ကြတယ်။
တကယ်ရော ညဘက် အချဉ်တွေစားရင် တကယ်ပဲ အစာအိမ်ကို ထိခိုက်မှာလား? ဒါမှမဟုတ် တခြားပြဿနာတွေ ရင်ဆိုင်ရမှာလား? ဒါမှမဟုတ် ဒါက ယုံတမ်းစကား (Myth) သက်သက်ပဲလား?
ညဘက် အိပ်ရာဝင်ခါနီးမှာ ချဉ်တဲ့အစားအစာတွေ စားသင့်၊ မစားသင့်
အချဉ်ဓာတ်ပါဝင်တဲ့ အစာပြေစာတွေကို ရှောင်ကြဉ်သင့်ပေမယ့် ဗီတာမင် C ပါဝင်တဲ့ သစ်သီးဝလံတွေကို စားတာမျိုးကိုတော့ အတန်အသင့်ပြုလုပ်လို့ရပါတယ်။ အလွန်အကျွံစားတာမျိုးကိုတော့ လုံးဝရှောင်ကြဉ်သင့်ပါတယ်။
အထူးသဖြင့် အချဉ်ဓာတ်ကဲတဲ့ အစားအစာတွေရဲ့ အများစုမှာ citric acid ပါဝင်နေတတ်ပြီး အိပ်ချိန်နဲ့ နီးကပ်နေချိန်မှာ အချဉ်စာတွေ စားသောက်မှီဝဲတာက အချဉ်ပေါက်တာမျိုးဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ အိပ်ပျော်နေစဉ် ၆-၇ နာရီလောက်အတွင်းမှာ အချဉ်ပေါက်တာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် တချို့တွေဟာ မနက်ပိုင်းတွေမှာ အစာခြေရည်တွေ အော့အန်တာမျိုး ကြုံရတတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ လူတစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦး ကိုယ်ခံအားစနစ်နဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းပုံချင်းမတူညီတာမို့ ဖြစ်နိုင်ခြေလည်း ကွာဟပေမယ့် ငါ့မှာတော့ ဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးလို့ ယတိပြတ်ယုံကြည်မှုထားလို့တော့ မရပါဘူး။
ဒါ့အပြင် တစ်ချို့သော အသက်အရွယ်အပိုင်းအခြားတွေမှာဆိုရင်လည်း အိပ်ယာဝင်ခါနီး အချဉ်စားတာဟာ အိပ်စက်မှုကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်ပါသေးတယ်။ အထူးသဖြင့် လူကြီးတွေမှာပါ။
နောက်ထပ်ဖြစ်နိုင်တာကတော့ အစာခြေပြဿနာပါပဲ။ ချဉ်တဲ့ စပ်တဲ့ အစားအစာတွေဟာ အလွန်အကျွံစားသုံးမိရင် ဗိုက်အောင့်တာတွေ၊ ဗိုက်နာတာတွေ ဖြစ်စေနိုင်တာကိုလည်း မမေ့သင့်ပါဘူး။ ချောင်းဆိုးတဲ့ ဝေဒနာကိုလည်း ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
နောက်ထပ် သိထားသင့်တဲ့အချက်က အိပ်ရာဝင်ခါနီး အချဉ်စားပေးတာဟာ ကိုယ်အလေးချိန်ကျဆင်းမှုကို အထောက်အကူမပြုဘူးဆိုတာပါပဲ။ လူအတော်များများက အိပ်ရာဝင်ခါနီး အချဉ်စာတွေစားပေးရင် ကိုယ်အလေးချိန်ကျဆင်းနိုင်တယ်လို့ ယုံကြည်မှုရှိထားကြပေမယ့် ဒီနှစ်ခု ဆက်စပ်မှုမရှိပါဘူး။ ဒါကြောင့် အိပ်ရာဝင်ခါနီးမှာ ဘာမှမစားတာအကောင်းဆုံးပါပဲ။
အကောင်းဆုံးကတော့ အိပ်ရာဝင်ချိန်နဲ့ ညစာစားချိန်ကို ၃ နာရီလောက် ခြားထားပေးဖို့နဲ့ တကယ်လို့ စားဖြစ်တယ်ဆိုရင်တောင်မှ အနည်းအကျဉ်းသာ မှီဝဲသုံးဆောင်ဖို့ပါပဲ။ ခုလိုပြုမူမယ်ဆိုရင် အိပ်စက်ရာမှာလည်း အထောက်အကူဖြစ်စေမှာဖြစ်တာမို့ အိပ်ရာထချိန်မှာလည်း လန်းဆန်းတက်ကြွနေမှာဖြစ်ပါတယ်။